EMEGHELA NGWAỌRỤ NA NDỊ NBIPUTE NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
EaseUS Partition Master - Ihe omume dị ike maka ijikwa disks na partitions. O nwere ike ịmepụta ma dezie nkewa na SSD na HDD.
Yiri n 'arụ ọrụ na Ọkachamara MiniTool, ma enwere iche.
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ iji sụgharịa diski ike
EaseUS Partition Master nwere ike ịmepụta partitions na SSDs efu na HDDs, ma ọ bụ na-enweghị ohere ohere. Na igbe nkwekọrịta kwekọrọ, ị nwere ike ịkọ aha na akara nke olu ọhụrụ, usoro faịlụ na ụyọkọ ụyọkọ, yana nha na ebe.
Iji nhazi, ị nwere ike ịgbanwe akara olu, usoro faịlụ, na ụyọkọ ụyọkọ na nkebi ahọrọ. A na-ebibi ozi niile edere na mpaghara ahụ.
Gbanwee ma bugharịa ma ngalaba
Ọrụ a setịpụrụ nha na ọkwa ọhụrụ maka otu nkebi dị. A na-agbanwe ihe onwunwe site na ihe nrịba nke egosiri na nseta ihuenyo, ma ọ bụ edere ha aka.
Ọrụ a, mgbe ị nyochara akụkụ nke a họọrọ, na-eme ka ịdeghari n'elu oghere a na-ejighi ya.
Jikọta ihe ọbụla
Mgbe ị jikọtara òkè na EaseUS Partition Master, ị họrọ disk nke ịchọrọ ịme usoro ahụ, wee dee akụkụ dị mkpa na akwụkwọ ozi ọhụrụ ahụ.
Ogwe Disk (nkebi) - aha egosiri na ndepụta nke ngwaọrụ na nchekwa "Kọmputa". Ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịgbanwe aha a.
Gbanwee akwụkwọ ozi
Akwụkwọ edemede (ngalaba) - adreesị mbụ nke olu ezi uche dị na ya, nke gụnyere itinye okporo ụzọ na faịlụ. Ọ dị mkpa iji nlezianya jiri ọrụ a, ebe ọ bụ na ụfọdụ mmemme, enweghị ike ịchọta faịlụ ndị dị mkpa na adreesị (ochie) kpọmkwem, nwere ike ịkwụsị ọrụ.
Ọrụ a na-enye gị ohere wepu akwụkwọ ozi mbanye (nkewa), si otú ahụ gbochie usoro ahụ na igosipụta ya na nchekwa "Kọmputa". Ọrụ ahụ bụ ihe a na-agbanwe agbanwe, na enweghị akụkụ ndị ọzọ (nha, data) gbanwere.
Ihichapụ data site na ngalaba
EaseUS Partition Master nwere ike iwepụ data sitere na nkewa ahọpụtara site na iji eserese ọtụtụ. A na-ahọrọ ọnụ ọgụgụ nkefe na aka.
Ndị ọrụ Wizards EdeUS Partition
Ọkachamara Clone Diski
Ọkachamara a na-arụ ọrụ abụọ:
1. Detuo zuru oke nke nnyepị ahọrọ (na akụkụ niile) gaa na onye ọzọ.
2. Nchịkọta naanị usoro na ịkpụ akpụkpọ ụkwụ.
Ọkachamara Ọpụpụ OS na SSD / HDD
Ngwaọrụ a na-enye gị ohere ịnyefee sistemụ arụmọrụ na disk ọzọ.
Ọkachamara Nchịkọta Nkebi
Oke akwukwo nke nkiti na-eme otu oru dika oru nke otu aha.
Hichapụ Ọkachamara Data
Ọrụ a, n'adịghị ka ịme ihe dị mfe, na-ewepụ data niile site na nkebi ahọrọ na nkebi n'onwe ya.
Ọkachamara Cleanup na ọkachamara
Ọkachamara ọkachamara nwere ike ime ihe ndị a:
1. Hichapụ data na-enweghị isi site na ngalaba.
2. Chọọ ma hichapụ faịlụ buru ibu.
3. Na-ebuli (disregment) disks.
Dopụ bọl disk
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmepụta bọtịnụ boot gị dabere na gburugburu ebe ị na-ebute ihe na mgbake WinPE. A ghaghị ibudata akụrụngwa ahụ n'onwe ya (ọkara).
Enwere ike ide edere na mkpo ọkụ, CD, ma ọ bụ chekwaa na ihe oyiyi.
Ihe ndekọ data niile dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke EaseUS Partition Master na, dịka nkwado onye ọrụ, dị na English.
Tụkwasị na nke a, enwere ike ịkpọtụrụ ndị njikwa ọrụ na ndị ọrụ gọọmentị na netwọk mmekọrịta.
Ntọala dị mma nke atụmatụ.
Hụ disk diski.
Ọrụ kachasị mma.
Ịnyefe usoro na cloning draịva.
Enweghị enyemaka na nkwado na Russian.
Ọ bụghị ihe niile a na-achọpụta.
A kwụrụ ụgwọ ahụ
EaseUS Partition Master - mmemme nwere ihe niile dị mkpa maka ọrụ na partitions na disk. Ọbụna enweghị akwụkwọ edemede na Russian anaghị emebi ya.
Download usoro ikpe nke EaseUS Partition Master
Ọkachamara Ọkara MiniTool Hetman Partition Recovery Nhazi Nkebi akwukwo Ihe nzuzo anwansi
EaseUS Partition Master bụ ngwanrọ ngwanrọ diski ike. Na-enye gị ohere ịmepụta ọsọ ọsọ na ngwa ngwa, wepụ ngalaba.
Sistemụ: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Onye Mmepụta: EaseUS